Donald Trump oo dib uga laabtay go’aankisii ku aadanaa Taiwan – Idil News
Donald Trump oo dib uga laabtay go’aankisii ku aadanaa Taiwan
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa u sheegay dhiggiisa Shiinaha, Xi Jinping, in uu tixgelin doono siyaasadda dalkiisa ee “Shiine mid ah” taas oo si cad u xeeqaysa sheegashada Beijing ee Taiwan.
Warbixin ka soo baxday Aqalka Cad ayaa sheegtay in labada nin wadahadal koodii u horeeyey ku yeesheen khadka Telefoonka oo intii uu socdayna Trump aqbalay in aanu ka leexan siyaasadii soo jireenka ahayd ee Maraykanka ee ku aadan Shiinaha, ka dib markii uu ka codsaday madaxweyne Xi.
Xidhiidhka Washington iyo Beijin ayaa ilaa bishii Diisember yara hakaday ka dib markii Trump ka gudoomey madaxweynaha Taiwan dhambaal hambalyo ah oo uu khadka telefoonka u soo mariyey.
Markaa wuu difaacay go’aanka uu hambalyadaa ku aqbalay, waxaanu sheegay in aanu garanayn sabab ku khasbaysa Maraykanka in uu u hogaansamo siyaasadda “Shiine mid ah”. Beijing waxay u aragtaa Taiwan in ay tahay qayb aan ka go’i karin Shiinaha.
Labada madaxweyne Xi iyo Trump ayaa is weydaarsaday martiqaadyo uu mid ba ka kale ku casuumay inuu dalkiisa booqdo.
Be the first to comment on "Donald Trump oo dib uga laabtay go’aankisii ku aadanaa Taiwan"